I-Cat shark: iimpawu, ukondla, indawo yokuhlala kunye nokuzala | Ngeentlanzi
Njengoko besikhankanyile amaxesha amaninzi kule, ulwandle yinto engayekiyo ukusothusa. Singazifumana iintlobo zaselwandle ezizodwa kangangokuba asinakuze sicinge ukuba zinokubakho. Le yimeko yekati yokrebe. Nangona ayisiyondawo ebonakalayo ukuba inkulu, inokusinika umbono wokuba siyibone. Igama layo lenzululwazi ngu IScyliorhinus retifer kwaye yeyosapho lweCarcharhiniformes shark.
Siza kukuxelela zonke iimfihlelo kunye neempawu zekati okrebe.
2 Indawo yekati yookrebe kunye noluhlu
4 Ukuzaliswa kwakhona kwekrebe
5 Umahluko phakathi kwe-dogfish kunye ne-cat shark
Kwintsapho yekrebe sinokufumana malunga malunga ne-150 yeentlobo ezisasazeke kuyo yonke imimandla yetropiki yomhlaba. Kukwaziwa ngegama eliqhelekileyo le-dogfish okanye i-limes.
Eli gama unikwa yena ngokufana ukuba inkwethu yamehlo akhe anayo nale feline. Inomzimba odibeneyo kwaye ulungile ongenazo izikali kunye nokuthungwa okufana nele sandpaper. Yilapho igama eliqhelekileyo livela khona. Inamaphiko amabini emqolo, iyenza ukuba ibe luhlobo olukhethekileyo lookrebe. Intloko yakhe imilo ethile. Inempawu ezahlukileyo ezijongeka ngathi yitrunk kwaye iyafana nemingxunya yempumlo.
Iseti yookrebe bekati imele ukuba yeyabo banepateni kulusu lwabo. Ngokungafaniyo nokuba nombala omnye ongwevu oqhelekileyo kookrebe, sinokufumana iintlobo ezahlukeneyo zezikhumba kolu krebe ngeepateni ezinje ngemivumbo, amabala okanye amachaphaza emibala eyahlukeneyo enjengombala omthubi okanye o-orenji.
Ayilulo uhlobo lokrebe olunobukhulu obukhulu nangona zikhona ezinye ezinokulinganisa ukuya kuthi ga kwi-4 yeemitha. Into eqhelekileyo kukuba bafike ukulinganisa i-1.20 yeemitha. Umhlathi wayo womelele njengoko unamazinyo agobileyo kwaye ubuncinci ngokomlinganiso. Iwasebenzisa ikakhulu ukuze akwazi ukutya iimollusks, ngamanye amaxesha amancinci kwaye ezinye izilwanyana ezinje ngoononkala.
Indawo yekati yookrebe kunye noluhlu
Lo krebe uyaqhelana nalo naluphi na uhlobo lwamanzi ashushu okanye akweleenjiko, enza ukuba ukusasazwa kwawo kubanzi ngokubanzi. Kukho iintlobo ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwindawo esikuyo. Kukho ezinye eziguqulwe kufutshane namazwekazi aseAsia, eAfrika naseMelika.
Ookrebe bekati baneentloni kakhulu ukudibana nabo ngobuqu kunokuba nzima. Ubungakanani bayo kunye nobukhulu bayo benza ukuba kungabikho lula ukubamba, yiyo loo nto iba luhlobo olunqabileyo. Ngokuphathelele kwindalo, ezinye iintlobo zolu sapho bakhetha ukudada ezinzulwini ezifikelela kwiimitha ezili-100. Nangona kunjalo, kukho abanye abakhetha amanzi aphantsi.
Ikhetha amanzi ashushu kunye nalawo ashushu kuba kukho ukutya okubonelela ngezakha mzimba ezaneleyo zokuphuhlisa nokuzala. Singazifumana iisampulu zekrebe kuLwandlekazi lweAtlantic, ngakumbi kwezona ndawo zinzulu phakathi kweNorway kunye neIvory Coast. Ukuze ukwazi ukuzingela ezi zilwanyana kwaye bathabathe imifanekiso, kuya kufuneka ube ngononophelo olukhulu kuba azibonakali. Banendlela yokuziphatha eneentloni kwaye, ukongeza kubungakanani babo obuncinci, kunzima ukubamba.
Ingadada kubunzulu obufikelela kwiimitha ezingama-2000.
Le krebe itya ikakhulu ukutya kwezilwanyana ezincinci ezingenamqolo ezifumaneka kubunzulu bolwandle. Ukutya kwayo kukutya kwaye kufuna isixa esikhulu senyama. Inokungenisa, nangona ubuninzi buncinci, ezinye zinezithuba kwinto elula yokuba nakho ukubandakanya ezinye zezondlo ekufuneka zikwazi ukuziphuhlisa phantsi kweemeko.
Ngokwengcali zebhayiloji yaselwandle ejongene nokufunda into etyiwa ngookrebe, bayangqina ukuba lo krebe uthatha njengexhoba ezinye iintlanzi ezincinci ngenxa yobukhulu bayo. Kungenxa yokuba oku ngumahluko ophambili othintela ukuba ungakwazi ukuzingela elinye ixhoba elikhulu. Ngokuchasene noko, oko akuthethi ukuba ukutya kwabo kunqabile kuba kukho iintlobo ngeentlobo zeentlanzi ezincinci kunye nezingenamqolo kwiindawo ezihlala ookrebe. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni esi silwanyana asihlali sitshintsha indawo ngaphandle kokuba siyimfuneko ngokungqongqo ngenxa yokunqongophala kokutya.
Ukuzaliswa kwakhona kwekrebe
Lo krebe une uhlobo lwayo lwe-oviparous lokuvelisa kwakhona. Oku kubandakanya ukubeka amaqanda kwindawo ekhuselekileyo kwaye nje ukuba ookrebe abancinci baqandusele, bazimele ngaphandle kwabazali babo. Ngokwesiqhelo yindoda ephetheyo yokukhusela amaqanda ade aqandusele. Singafumana iisampulu zolu krebe kwiindawo ezinzulu ezingaphantsi. Umzekelo, abanye ookrebe abazalayo baye babonwa kwiimangrove okanye kwiingqaqa.
Umthamo we ukwazi ukuphinda kabini okanye ukuphindaphinda kathathu ubungakanani bakho ukuba uziva usoyikiswa Le yenye yezona zinto zimangalisayo kunye nendlela yokuphila enomdla. Xa esiba noloyiko kuxa ekwazile ukuphinda kathathu ubungakanani bakhe ukuphuma engxakini. Oku kufezekiswa kusetyenziswa umatshini onalo lonke udidi lwalo krebe ovumela isisu sonke ukuba sithathe imilomo emikhulu yamanzi ukwandisa ubungakanani bayo ngokubanzi.
Umahluko phakathi kwe-dogfish kunye ne-cat shark
Ukwahlula iintlobo ezimbini ezifanayo, ezifana ne-dogfish kunye ne-cat shark, kufuneka uyazi inxenye yeempawu zazo zangaphandle. Masibone umohluko ophambili:
Ikati yokrebe inayo impundu nje ebulalayo ekhonza ukumnika intsholongwane enkulu. I-Dogfish ayinayo.
Le krebe ayinalo naluphi na uhlobo lomqolo kumaphiko omqolo kunye ne-dogfish.
Le ntlanzi inombala ongacacanga ongwevu owahlula ngayo kwimibala eqaqambileyo anayo lo krebe. Ukongeza, sikhankanyile ukuba banokuba neendawo ezinemibala eqaqambileyo kunye nee-moles.
Ikati okanye ukrebe zinomzimba obhityileyo kwaye zinamaphiko emqolo aqala kwimiphetho ye-pelvic. Okwesibini, I-dogfish ineempiko zangasemva ezibekwe ngaphezulu kwephiko le-pelvic. Oku kwenza umzimba wayo ube mfutshane ngobukhulu.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga ne-cat shark.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukrebe Ikati